Alow Yaa Cigaal Uga Warama Caawa Waxa Jooga” – Murtimaal
Alow Yaa Cigaal Uga Warama Caawa Waxa Jooga”
Allow yaa cigaal uga warrama caawa waxaa jooga Cilmibaadhayaal ka tirsan jaamacadda Boston ee dalka Maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in ay jiraan shaybaadho dhiigga lagu samaynayo oo qaadistoodu fududahay, oo ka qayb qaadan kara in la sii garto nugaylka uu qofku u yahay cudurrada qaar in ay mustaqbalka ku dhacaan, isla markaana qiyaas guud ka bixin kara cimriga qofka.
War uu murtimaal turjumay oo laga sii daayey talefishanka Al-Xurrah oo xaruntiisu tahay dalka Maraykanka oo ay dawladdu maalgeliso, ayaa lagu sheegay in cilmibaadhayaasha daraasaddan sameeyey ay shaybaadheen tilmaamaha hiddaha ah ee ku jira saamballo dhiig oo laga qaaday dad tiradoodu dhan tahay 4700 oo da’doodu u dhexeyso 30 illaa 110 sano, iyada oo si gaar ah la isu barbar dhigay natiijada shaybaadhkan iyo xaaladda caafimaad ee dadkani waxa ay ku dambaysay markii gaboobeen.
Xeeldheerayaasha cilmibaadhistan sameeyey natiijada ay ka heleen tijaabooyinkan waxaa uga caddaatay in dhiiggan laga garan karo dadka iyaga oo caafimaadkoodu fiican yahay haddana gabowgu ku soo degdegayo iyo xitaa kuwa ay suurtogal tahay in ay cudurro khatar ahi ku hacaan, sida Kansarka, Wadne Xanuunka iyo Macaanka.
Cilmibaadhayaashu waxa ay sheegeen in natiijada ay daraasaddoodani daahfurtay ka qayb qaadan karto in dad badan oo marka ay gaboobaan cudurro ku soo waajahanyihiin laga badbaadiyo, oo ka hortag loo sameeyo.
Previous Post:gaadhi laga shikiye oo galay guriga cad
Next Post:Daawo warbixin naxdlin leh nin Somali ah oo xaaskiisa dilay isaguna is dilay maxa ku kalifay